थाहा खबर: एएफसी यु-१६ फुटबल च्याम्पियनसिप छनोटमा नेपालको लज्जास्पद हार
जोर्डनमा जारी एएफसी यु-१६ फुटबल च्याम्पियनसिप छनोटमा नेपाल तेस्रो खेलमा दोस्रो हार ब्योहोर्न बाध्य भएको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग ७–० गोल अन्तरले पराजित हुँदा प्रतियोगिताको अघिल्लो चरण सम्भावना समाप्त भएको हो। प्रतियोगिताको शीर्ष टोली छनोट हुनेछन्।
अम्मानको जार्का सिटीस्थित प्रिन्स मोहम्मद अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा पहिलो हाफमा ४–० ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप तीन गोल खान पुगेको थियो। जितसँगै ताजिकिस्तानले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। ताजिकिस्तानले तीन खेलबाट नौ अंक जोडेको छ। तीन खेलमा दुई हार व्यहोरेको नेपालको एक अंक छ।
यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग ७–० ले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतसँग १–१ गोलको बराबरी खेलेको थियो। छनोटको समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालले अब अन्तिम खेलमा आइतबार श्रीलंकाको सामना गर्ने छ।
जलजलाका ८ सय परिवारलाई ३० लाखको खाद्यान्‍न राहत
नेकपा विवादमा ब्रेक! कसले उचाल्दैछ ओली-दाहाललाई?
अमिताभ बच्चनकाे दाेस्राे रिपाेर्ट पनि पाेजेटिभ
बारीमा कुहिए टमाटर, लगानीसमेत उठेन किसानकाे
सल्यानी स्याउको स्वाद नचाखी के थाहा? (फोटो फिचर)